Ikhaya / Inqubomgomo yobumfihlo
Le yinqubomgomo ye-opskar.com yokuhlonipha ubumfihlo bakho maqondana nanoma yiluphi ulwazi esingaluqoqa ngenkathi sisebenzisa amawebhusayithi ethu.
Njengabaningi be-opharetha bewebhusayithi, i-OPS iqoqa imininingwane engazikhombisi uqobo yalolo hlobo iziphequluli zewebhu nezinsizakalo ezenza ukuthi zitholakale, njengohlobo lwesiphequluli, ukuthanda ulimi, isayithi elibhekisayo, nosuku nesikhathi sesicelo sesivakashi ngasinye. ukuqoqa imininingwane engeyona eyeyakho ukuqonda kangcono ukuthi izivakashi ze-OPS ziyisebenzisa kanjani iwebhusayithi yayo. Ngezikhathi ezithile, i-OPS ingakhipha imininingwane engeyona eyeyakho ekuhlanganisweni, isb. Ngokushicilela umbiko ngamathrendi ekusetshenzisweni kwewebhusayithi yayo.
I-OPS iphinda iqoqe imininingwane engabonakalisa umuntu njengama-intanethi ye-Inthanethi Protocol (IP) abasebenzisi abangene ngemvume nabasebenzisi abashiya amazwana kuma-blogs / amasayithi e-opskar.com. I-OPS iveza kuphela ukungena ngemvume kumsebenzisi kanye nokuphawula kwamakheli e-IP ngaphansi kwezimo ezifanayo ezisetshenziselwayo futhi kuveza ulwazi olumuntu siqu oluchazwe ngezansi, ngaphandle kokuthi amakheli e-IP commenter kanye namakheli e-imeyili abonakala futhi adalulwe kubaphathi bebhulogi / isayithi lapho amazwana ishiywe.
Izivakashi ezithile zamawebhusayithi e-OPS zikhetha ukusebenzisana ne-OPS ngezindlela ezidinga i-OPS ukuthi iqoqe imininingwane ekhomba umuntu uqobo. Inani nohlobo lwemininingwane eqoqwa yi-OPS kuya ngohlobo lokuxhumana. Isibonelo, sicela izivakashi ezibhalisela ku-ospkar.com ukuthi zinikeze igama lomsebenzisi nekheli le-imeyili. Labo abahlanganyela ekusebenzisaneni ne-OPS bayacelwa ukuthi banikeze imininingwane eyengeziwe, kufaka phakathi lapho kudingeka ulwazi lomuntu siqu nolwezimali oludingekayo ukucubungula lokho kuthengiselana. Esimweni ngasinye, i-OPS iqoqa lolo lwazi kuphela uma kudingekile noma kufanelekile ukufeza inhloso yokuxhumana kwabavakashi ne-OPS. I-OPS ayivezi imininingwane ekhomba umuntu uqobo ngaphandle kokuchazwa ngezansi. Futhi izivakashi zingahlala zenqaba ukunikezela ngemininingwane ekhomba umuntu uqobo, ne-caveat engabavimba ukuthi bahlanganyele emisebenzini ethile ehlobene newebhusayithi.
I-OPS ingase iqoqe izibalo mayelana nokuziphatha kwezivakashi kumawebhusayithi ayo. I-OPS ingabonisa lolu lwazi esidlangalaleni noma lunikeze abanye. Kodwa-ke, i-OPS ayidalululwazi ulwazi oluthile ngokwabo ngaphandle kokuchazwe ngezansi.
I-OPS idalula imininingwane engakhomba uqobo kanye nokuhlonza uqobo kuphela kulabo babasebenzi bayo, osonkontileka kanye nezinhlangano ezihlangene ukuthi (i) badinga ukwazi lolo lwazi ukuze balucubungulele egameni le-OPS noma banikeze izinsizakalo ezitholakala kumawebhusayithi e-OPS, futhi ( ii) ezivumile ukungazidaluli kwabanye. Abanye balabo basebenzi, osonkontileka nezinhlangano ezihambisanayo zingatholwa ngaphandle kwezwe lakini; ngokusebenzisa amawebhusayithi e-OPS, uyavuma ukudluliselwa kwalolo lwazi kubo. I-OPS ngeke iqashe noma ithengise imininingwane engahlonza uqobo neyomuntu uqobo kunoma ngubani. Ngaphandle kwabasebenzi bayo, osonkontileka kanye nezinhlangano ezihambisanayo, njengoba kuchaziwe ngenhla, i-OPS idalula imininingwane engakhomba umuntu uqobo kanye nokuzikhomba yena kuphela ekuphenduleni isamanisi, umyalelo wenkantolo noma esinye isicelo sikahulumeni, noma lapho i-OPS ikholelwa ngokuthembekile ukuthi ukudalulwa kunesidingo esizwakalayo ukuvikela impahla noma amalungelo e-OPS, abantu besithathu noma umphakathi wonkana. Uma ungumsebenzisi obhalisiwe wewebhusayithi ye-OPS futhi unikeze ikheli lakho le-imeyili, i-OPS kwesinye isikhathi ingakuthumela i-imeyili ukukutshela ngezici ezintsha, ukucela impendulo yakho, noma ukukugcina wazi ngokwenzekayo nge-OPS imikhiqizo. Uma usithumela isicelo (ngokwesibonelo nge-imeyili noma ngenye yezindlela zethu zempendulo), sinelungelo lokuyishicilela ukuze isisize sicacise noma siphendule isicelo sakho noma isisize sisekele abanye abasebenzisi. I-OPS ithatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuvikela ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukusetshenziswa, ukuguqulwa noma ukucekelwa phansi kwemininingwane engakhomba umuntu uqobo nokuhlonza yena uqobo.
Ikhukhi luchungechunge lwemininingwane egcinwa yiwebhusayithi kwikhompyutha yesivakashi, nokuthi isiphequluli sesivakashi sinikela kuwebhusayithi ngaso sonke isikhathi lapho isivakashi sibuya. I-OPS isebenzisa amakhukhi ukusiza inkampani yakho ikhombe futhi ilandelele izivakashi, ukusetshenziswa kwazo kwewebhusayithi ye-OPS, kanye nokuthandwa kwabo kokufinyelela kuwebhusayithi. Izivakashi ze-OPS ezingafisi ukuthi amakhukhi abekwe kumakhompyutha azo kufanele zisethe iziphequluli zazo ukuthi zenqabe amakhukhi ngaphambi kokusebenzisa amawebhusayithi e-OPS, okunenkinga yokuthi ezinye izici zamawebhusayithi e-OPS zingase zingasebenzi kahle ngaphandle kosizo lwamakhukhi.
Uma i-OPS, noma impela yonke impahla yayo, itholakele, noma kumcimbi ongalindelekile ukuthi i-OPS iphuma ebhizinisini noma ingene ekufakeni imali, ulwazi lomsebenzisi luyoba enye yezimpahla ezidluliselwa noma ezitholwa ngumuntu wesithathu. Uyavuma ukuthi ukuthunyelwa okunjalo kungenzeka, nokuthi noma yikuphi othole i-OPS angase aqhubeke ukusebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu njengoba kushiwo kule nqubomgomo.
Izikhangiso ezivela kunoma iyiphi yamawebhusayithi ethu zingathunyelwa kubasebenzisi ngabalingani bokukhangisa, abangabeka amakhukhi. Lawa makhukhi avumela iseva lesikhangiso ukuqaphela ikhompyutha yakho ngaso sonke isikhathi lapho bakuthumela khona isikhangiso se-intanethi ukuqoqa ulwazi mayelana nawe noma abanye abasebenzisa ikhompyutha yakho. Lolu lwazi luvumela amanethiwekhi ad, phakathi kwezinye izinto, ukuletha izikhangisi ezihlosiwe ezikholelwa ukuthi ziyoba nesithakazelo esikhulu kuwe. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ihlanganisa ukusetshenziswa kwamakhukhi nge-OPS futhi ayikufihli ukusetshenziswa kwama-cookies kunoma yimuphi umkhangisi.
Yize izinguquko eziningi kungenzeka zibe zincane, i-OPS ingashintsha Inqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile, futhi ngokubona kwedwa kwama-ops. I-OPS ikhuthaza izivakashi ukuthi zivame ukuhlola leli khasi ukuthi alukho yini ushintsho kunqubomgomo yalo yobumfihlo. Uma une-akhawunti opskar.com, ungahle futhi uthole isexwayiso esikwazisa ngalezi zinguquko. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwaleli sayithi ngemuva kwanoma iluphi ushintsho kule Nqubomgomo Yobumfihlo kuzokwakha ukwamukela kwakho lolo shintsho.
Imikhiqizo yokuhlanza imoto engcono kakhulu ye-2019
I-Best Windshield Washer Fluid Ku-2019
Umkhiqizo Wokuhlanza Ngaphakathi Kwemoto
I-Car Wheels Cleaner
Amathebulethi asebenza kahle e-Bio ahlanzekile
Indlela yokuhlanza ingaphakathi lemoto nemikhiqizo yasendlini
I-Multifunctional Effervescent Cleaner
Imikhiqizo ye-Premium Car Wash
I-Productos para lavado de carros
Izimpahla Ezinhle Zokususa Izimoto